Ka Hortaga Cudurka Macaanka - Daryeel Magazine
Xanuunka macaanka ayaa siyaabo kala duwan u haya dadyow badan oo dunida ku nool kuwaasi oo qaarkoodna ula nool yihiin si taxaddar leh kuwona joogaan marlaxado bilow ah halka qaar kalena u si daran ugu baahay oo irbado joogta ah jidhka ugula daalaan maalin walba.
14 bisha November ayaa ah maalinta loo aqoonsaday in ay noqoto maalinta macaanlayda aduunka maadama uu dhashay ninkii u horeeyey ee soo saaray irbada ama dawada lagu dabiibo kaadi macaanka oo magaciisa la odhan jiray Frederick Banting oo ay ka wada shaqeeyeen ninka isna la odhan jiray Charles Best, waxaanay soo saareen dawada sanadkii 1922-kii
Xanuunkan ayaa la aaminsan yahay in uu hayo tiro ku siman 365 Million oo ku filiqsan daafaha dunida oo u dhiganta 8% oo kamida bulshada ku nool aduunka.
Macaanka ayaa inta badan waxa sababa cuntada aynu cunno ee u badan carbohydrates ee aan dheelitirnayn halka isticamaalka sonkorta saayidka ahina ay sii kordhiso halis u ahaanshaha in cudurkani u ku haleelo taasi oo wacyigelinteedu ay aad ugu liidato bulshada aynu ka soo jeedno.
Astaamaha lagu garto xanuunkaan waxaa ka mid ah, Harraad badan, kaadi badnaan, awood darro, aragti caad leh, miisaankaaga oo xawli isku dhima iyo gaajo joogto ah.
Halkaan hoose ka daawo muuqaal wacyigelin ah oo ku saabsan cudurka macaanka oo ay Hafza Hassan nala wadaagayso:
Muufo Si Fudud Foornada Loogu Samaynayo Qado Caafimaad Leh Oo Caruurta U Fiican Sidee U Kobcin Kartaa Cafimaadka Lafahaaga? Cunto Cayilka Kaa Ridaysa Mudo Gaaban, Nafaqo Badanna Leh